WWE MARVEL GUARDIANS YEGLASS DRAX UDAVID BAUTISTA - DAVE BAUTISTA
J Ilitye Lesini
Ukumangalisa kunika i-WWE Champion yangaphambili uDavid Bautista Guardians yeGalaxy Role
Ewe, ubuncinci akukho mntu unokuthi akayiboni indawo, akunjalo?
Ukumangalisa kuqinisekisile ukusebenzisana neenkwenkwezi zangaphambili ze-WWE kunye ne-MMA UDavid umbhaptizi (aka Batista) ukudlala iDrax uMonakalisi kuyo Abagcini beGalaxy . Imidlalo yeethrone inkwenkwezi UJason Momoa Ngaphambili bekukho amarhe okuba kuthethathethwano kodwa kukho amarhe okuba wayefuna imali eninzi kakhulu.
I-Hollywood Reporter ibhala:
UBautista ngoku uba ngumdlali weqonga wesibini emva UChris Pratt ukujoyina iprojekthi, enamaqhina Inkqubo ye- Abaphindezeli Kwaye iya kuqhagamshela kwezinye iimuvi eziMangalisayo.
Galaxy Amaziko ePeter Quill / Star-Lord (Pratt), umqhubi wenqwelomoya waseMelika ophelela esithubeni embindini wengxabano kwaye aqhubeke nokubaleka ngekamva labo banento efunwa ngumntu wonke, ngokwenkcazo yebali.
UDrax ngumntu ovusiweyo njengegorha eliluhlaza ngenjongo yokubulala u-Thanos (umguvela kwindawo yokugqibela yokuhlekisa Abaphindezeli ). Amandla akhe aquka ukubhabha, amandla amakhulu kunye nokuqhuma kwamandla.
UBautista akanazindima zokwenza ngokubuyela kwindawo yakhe, ngaphandle kokuba ubala ixesha lakhe kunye neWWE, endiyenzayo. Kutshanje ubeke inkwenkwezi kwi IiRZA Indoda eneNqindi yentsimbi kwaye izayo Riddick ifilimu. UBautista akangomntu ongaziwayo kwiindima ezinxulumene neencwadi kodwa, undwendwela-inkwenkwezi njengomphambukeli kwii-CW's ISmallville .
Abagcini beGalaxy isenazo iindlela zokuhamba ngaphambi kokuba kugqitywe. Kusafuneka bafumane abadlali ukuba badlale intombi eyamkelweyo ye-Thanos, umthi omkhulu kunye ne-raccoon.
(nge Intatheli yaseHollywood )
Ubomi Bufutshane Kakhulu
Billy Bk Uqhushululu
Idris elba lantern eluhlaza tweet
nkosi yamakhonkco amantombazana
waphuzwa yi-rose cocaine
UVincent van gogh ugqirha ongumdlali weqonga
Inenekazi lichithe ikofu eshushu i-mcdonalds
Le yindlela idemokhrasi esifa ngayo